ရိုးရိုးဂျာမန်ဟင်းလျာများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | Alemania, gastronomy
ဂျာမနီသည် ရာစုနှစ်များစွာ သမိုင်းကြောင်းရှိသော ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏ အစားအစာသည် ဤယဉ်ကျေးမှုခရီးကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်။ ပြင်သစ်၊ အီတလီ ဒါမှမဟုတ် စပိန်လို နာမည်ကြီးတာမဟုတ်ပေမယ့် ခရီးထွက်ရင် မြည်းစမ်းသင့်တဲ့ ဟင်းပွဲအစုံပါရှိပါတယ်။
ဂျာမနီတည်ရှိရာဒေသသည် ယဉ်ကျေးမှုကြွယ်ဝပြီး ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများက ခေတ်မီ ဂျာမန်အစာအာဟာရကို ပုံဖော်ရာတွင် အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ပြီးတော့ ဒီနေ့၊ ပုံမှန် ဂျာမန်ဟင်းလျာများ။
1 ဝက်အူချောင်းနဲ့ ဘီယာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။
ဝက်အူချောင်းနဲ့ ဘီယာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။
ဂျာမန်ဟင်းလျာအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာတာက ဒီဒြပ်စင်နှစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့် German gastronomy က အများကြီးပိုသိသာပါတယ်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ အချက်အပြုတ်သမိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ အမြစ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ပထဝီဝင်အနေအထားနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျာမန်ဟင်းလျာသည် ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတိုင်း၏ ဒေသအသီးသီးတွင် အထူးဟင်းလျာများနှင့် ထူးခြားသော အရသာရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်းသည်၎င်း၏ဝက်သားဟင်းအတွက်လူသိများသည်။ပတ်ဝန်း ကျင်ရှိနေစဉ် ဟမ်းဘတ်သည် ငါးများအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။. အမှန်တရားကတော့ နေ့လည်စာနဲ့ မနက်စာမှာတောင် သူတို့ရဲ့ ဟင်းလျာတော်တော်များများမှာ အသားပါရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အစားအစာတစ်ခုတွင် အသား၊ ခရင်မ်ဆော့စ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဘီယာအချို့ပါဝင်သည်၊ သို့သော် လက်လွတ်မခံသင့်သော ပုံမှန်ဟင်းလျာများကို ကြည့်ကြပါစို့။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အမဲသားစွပ်ပြုတ်ကို ယခင်က ရှာလကာရည်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံဖြင့် ရောစပ်ထားသည်။. ၎င်းသည် ရှေးယခင်ကတည်းက ထူထဲပြီး ကယ်လိုရီပါသော စွပ်ပြုတ်ဖြစ်သည်။ အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင် နှင့် ကြက်ဥ အာလူးဟုခေါ်သည်။ kartoffelklöbe သို့မဟုတ် အာလူးပြုတ်၊ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
အသားသည် အဖြူရှလကာရည်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ရက်ပေါင်းများစွာ ရောထားသော မြင်း သို့မဟုတ် အသားများ ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားဟင်းလျာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်မီနူးတွင် အမြဲရှိသည်။
သူတို့ဖြစ်ကြသည် ဝက်လက်ဆစ် ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် လူ၏ဦးခေါင်းအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ကတစ် အသားကင်အရေပြားအရိုးကနေ အလွယ်တကူ ခွာပြီး ပျော့ပျောင်းပြီး အရည်ရွှမ်းပြီး အသားအရေ ကြည်လင်လာသည်အထိ လုံလောက်ပါတယ်။ ပန်းကန်ပြားတစ်ခုဖြစ်၏။ Bavaria တွင် အလွန်နာမည်ကြီးသည်။.
အထူးသဖြင့် လှီးဖြတ်မှုကြီးသောအခါတွင် ဤအသားကို ရက်အတော်ကြာ မြိန်စေပါသည်။ ထို့နောက် အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ နှစ်ရက်မှ သုံးနာရီကြား နိမ့်သော အပူချိန်တွင် နာရီပေါင်းများစွာ ကင်ပြီး များသောအားဖြင့် အာလူး သို့မဟုတ် ဂေါ်ဖီထုပ်ဖြင့် ကျွေးသည်။ မြူးနစ်မှာရှိတယ်။ el ပန်းကန်။
ဒီဟင်းက Saxony ဒေသ၏ပုံမှန် အရသာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အသားလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် မုန်ညင်းချဉ်တို့ဖြင့် လှိမ့်ထားသော အသားအလွန်ပါးပါးချပ်များထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ဝိုင်နီဖြင့် ကင်ပြီး ချက်ပြုတ်ပြီးနောက် အရသာကောင်းမွန်သော အရသာကို ပေးဆောင်သည်။
Rouladen ကို အာလူးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ အာလူးထောင်း သို့မဟုတ် အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်များဖြင့် ညစာဖြင့် ရိုးရာအရ ကျွေးမွေးပါသည်။ အရံဟင်းအနေနဲ့ ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဆောင်းရာသီ၊ ကင်တာတွေလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျန်ရှိသော ငံပြာရည်သည် ဟင်းပွဲ၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသားပေါ်တွင် အမြဲသွန်းလောင်းသည်။
ဤဟင်းလျာသည် သြစတြီးယားနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း ဂျာမနီတွင် အလွန်နာမည်ကြီးလာသည်။ ကတစ် အလယ်တွင်ဒိန်ခဲနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်အတူ breadcrumbs ဖုံးအုပ်ထားသော cutletအာလူးနဲ့ အစိမ်းသုပ်နဲ့ ကျွေးတာ တကယ့်ကို အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပါ။
ခင်ဗျားသူ့ကိုဘယ်လိုထင်လဲ ယုန်စွပ်ပြုတ်? စွပ်ပြုတ်ကြိုက်ရင် ဂျာမနီက သင့်အတွက်ပါ။ စွပ်ပြုတ်များသည် ဆောင်းရာသီ ကြာမြင့်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော နိုင်ငံများတွင် ကယ်လိုရီများလွန်းသောကြောင့် စွပ်ပြုတ်များသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင် ယုန်သားကို ကိုက်အရွယ်အပိုင်းပိုင်းများ ဖြတ်ပြီး ၎ကြက်သွန်နီ၊ စပျစ်ရည်နှင့် ချက်ကြ၏။ ပွက်ပွက်ဆူလာသည်အထိ နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် တည်ထားပါ။ marinade ကို စပျစ်ရည်နှင့် ရှာလကာရည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ယုန်၏ကိုယ်ပိုင်သွေးဖြင့် ပျစ်သည်။
နှုတ်ကပတ်တရားတော် hase ဂျာမန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယုန်ငရုတ်ကောင်းထက် အခြားအမွှေးအကြိုင်များနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ပေါ်လာသော်လည်း ယုန်နှင့် pfeffer သည် ငရုတ်ကောင်းဖြစ်သည်။ Bavaria တွင် ဤဟင်းလျာသည် စပ်သော သို့မဟုတ် ချိုသော paprika ကိုလည်း ထည့်သည်၊
ဂျာမန်ဟင်းလျာများကို ဝက်အူချောင်းအဖြစ် လျှော့ချ၍မရဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောသော်လည်း ၎င်းတို့ကို အမည်ပေးခြင်းကို ရပ်တန့်၍မရပါ။ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဝက်အူချောင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် ရှည်လျားသော အစဉ်အလာရှိသည်။ တချို့လည်း ရှိတယ်။ ဝက်အူချောင်းအမျိုးအစား ၁၅၀၀။ ဒေသဆိုင်ရာ အထူးပြုချက်များစွာ ရှိသည်- ဘာလင်တွင် လူကြိုက်များသော အဖြူရောင် မြူးနစ် ဝက်အူချောင်း သို့မဟုတ် ketchup နှင့် ဝက်သား ဝက်အူချောင်း။
ဝက်အူချောင်းများ များသောအားဖြင့် လမ်းဘေးအစားအစာများ ၊ဒါပေမယ့်လည်း စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာ ကျွေးပြီး သိပ်စျေးမကြီးတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံမှန်ဝက်အူချောင်း Bratwurst သို့မဟုတ် ဝက်အူချောင်းကင်။
၎င်းသည် နိုင်ငံအတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး လမ်းဘေးအစားအစာဖြစ်သည်- ယေဘုယျအားဖြင့် ဝက်သားနှင့် အမဲသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရသာရှိသည်။ ဂျင်း၊ nutmeg၊ colander သို့မဟုတ် caraway၊ ဇီရာနှင့်. ကြွပ်ကြွပ်အရေခွံနဲ့ကင်ပြီး မုန်ညင်းနဲ့ ketchup နဲ့ ရေဆေးပြီး တည်ခင်းထားပါတယ်။ တခါတရံမှာ ရိုးရိုးမုန့် ဒါမှမဟုတ် ဝက်အူချောင်းနဲ့ ချက်လို့ရပါတယ်။ ကတစ် ပုံမှန်ဂျာမန်နွေရာသီဟင်းလျာ။
နောက်ထပ် လူကြိုက်များတဲ့ ဝက်အူချောင်းအမျိုးအစားကတော့ knockwurst သို့မဟုတ်ပြုတ်ဝက်အူချောင်း. အမဲသား သို့မဟုတ် ဝက်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကြီးမားပုံရသည်။ ဟော့ဒေါ့. ဒါပေမယ့် ပုံမှန် ဟော့ဒေါ့ထက် ပိုကြီးပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက အများကြီး ပိုကောင်းတာကြောင့် ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဤဝက်အူချောင်းတွင် ပန်းရောင်အသွေးနှင့် တစ်မျိုးရှိသည်။ မီးခိုးငွေ့ အရသာ ပွက်ပွက်ဆူပြီးနောက် ဆေးလိပ်အနည်းငယ် ထွက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်နှင့် Dijon မုန်ညင်းနှင့်အတူကျွေးမွေးခဲ့သည်။
စမ်းကြည့်ဖို့ နောက်ထပ် ဝက်အူချောင်း weisswurst ၎င်းသည် ရိုးရာ Bavarian ဝက်အူချောင်းဖြစ်သည်။ နံနံပင်၊ သံပုရာသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း၊ ဖာလာတို့ဖြင့် ချက်ထားသော အမဲသားနှင့် ဝက်ပေါင်ခြောက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် အရေပြားမကွဲစေရန် ရေနွေးပူပူတွင် ပြုတ်ထားသောကြောင့် နံနက်ခင်းတွင် သရေစာအဖြစ် စားသုံးကြသည်။ ပြီးနောက် ချိုမြိန်သောမုန်ညင်းအချို့နှင့်အတူ pretzel နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ဟေ့ ဘီယာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်အူချောင်းများနှင့် ဆက်၍ ဟားဟား. ဤကဲ့သို့သော ဂျာမန်ဝက်အူချောင်း ၎င်းကို 1949 ခုနှစ်တွင် ဘာလင်တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။ ဝက်သားနှင့် ketchup ဆော့စ်နှင့် ဟင်းခတ်မှုန့်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများကို စစ်ပွဲအပြီးတွင် မြို့တွင်းရှိ ဗြိတိသျှစစ်သားများက ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟု ထင်ရသည်။
၎င်းတို့ကို အကင်များ စားသုံးကြပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ရေပန်းစားပြီး ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြတိုက်တစ်ခုပင် ရှိသေးသည်။ ဘာလင်နှင့် ဟမ်းဘတ်တို့တွင် ၎င်းတို့ကို ပြင်သစ်အကြော်များဖြင့် ကျွေးပြီး မုန့်တစ်ခုထဲတွင် ထည့်ထားသည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အာလူးများသည် ဂျာမန်အစာအာဟာရတွင် အလွန်ပါဝင်ပါသည်။ရန်။ ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ၎င်းတို့နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာပြီး ၁၉ ရာစုတွင် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့သည်။ kartoffelpuffer သည်aအာလူးကြော် ပန်ကိတ်အာလူးကို ထောင်းပြီး နံနံပင်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဥတို့နဲ့ ရောမွှေပါ။
စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး အများအားဖြင့် မနက်စာအတွက် ကြက်ဥ၊ သို့မဟုတ် ပန်းသီးဆော့စ် သို့မဟုတ် အချဉ်မုန့်ဖြင့် တည်ခင်းလေ့ရှိသည်။
၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အာလူးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်များ နှင့် ပြင်ဆင်နည်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်- အာလူးအစိမ်းနှင့် ပြုတ်ထားသော အာလူးများကို ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ချက်ထားသော အာလူးနှင့် တိုက်ရိုက် ရောစပ်၍ဖြစ်စေ သန့်စင်သွားသည်အထိ ဆားငံရည်ဖြင့် ပြုတ်ထားသော ဘောလုံးငယ်များကို ပြုလုပ်ပါ။
၎င်းသည် ပုံမှန် အလယ်တန်းဟင်းဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာ အသီးအရွက်တွေပဲ ကျွေးတယ်။ အရံဟင်းအဖြစ် ပေါင်းရင် ငံပြာရည်ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ရေပန်းစားသော သရေစာဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ဗေဒဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးပြတိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Thuringian Sandwich Museum တွင် ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းကို သင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာရိုးရိုးပါပဲ။ စိမ်ထားသောဂေါ်ဖီထုပ် တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ကို အလွန်နုပ်နုပ်လှီးဖြတ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ စိမ်ထားပါ။ အချိန်အတော်ကြာပြီး ကြာမြင့်ပါတယ်။ အချဉ်တစ်ခုခု၊ ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ သကြားဓာတ်ကို အချဉ်ဖောက်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ပါ။
အသားပါသော ဟင်းပွဲများအတွက် တွဲဖက်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် သက်သတ်လွတ်ဟင်း၊ ကြက်ဥခေါက်ဆွဲ၎င်းသည် ဂျာမနီတွင်သာမက ဆွစ်ဇာလန်၊ Austria နှင့် Liechtenstein တို့တွင်လည်း အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတို့ကို ဂျုံမှုန့်၊ အသစ်များ၊ ဆားနှင့် ရေအေးအချို့ဖြင့် အိမ်လုပ်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ထို့နောက် ခေါက်ဆွဲများကို လှီးဖြတ်ပြီး ဆားနယ်ထားသော ရေနွေးဖြင့် မျှောသည်အထိ ပြုတ်ပါ။ အရည်ပျော်ချိစ်များစွာဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို ကျွေးသည်။ ၎င်းသည် သူ့ဘာသာသူ အဓိက ဟင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို အသားပါတွဲဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဤဒိန်ခဲအမျိုးအစားသည် ဆွစ်ဇာလန်နှင့် နယ်နိမိတ်တွင် ပို၍ထင်ရှားပြီး တစ်ခုရှိသည်။ အရသာရှိသော creamy texture နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာ. အဆီတစ်ဝက်၊ ထောပတ်စစ်စစ်နဲ့ ပါရှိပါတယ်။ ခိုင်ခံ့သောအနံ့။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် pretzel ၏ဂျာမန်ဗားရှင်း သင်မြင်လိမ့်မည် လမ်းတွေ၊ ဂိုဒေါင်တွေနဲ့ စူပါမားကတ်တွေမှာ အများကြီးရောင်းတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပျစ်သည်၊ အငန်ရှိပြီး အပေါ်မှနှမ်းစေ့များပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မုန်ညင်းဖြင့် စားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဂျာမနီမှာ ဘီယာမသောက်ဘဲ ဘယ်သူမှ မစားနိုင်ဘူး။ ဂျာမနီမှာ ဘီယာချက်တဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ်။၊ ရာစုနှစ်များ။ Pilsner အမျိုးအစားသည် အားလုံးတွင် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သော်လည်း၊ ဒေသတစ်ခုစီ သို့မဟုတ် မြို့ သို့မဟုတ် မြို့တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရှိသည်။
Bavaria သည် နာမည်ကြီး ဘီယာဒေသဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် ဂျုံဘီယာကောင်းကောင်းကို မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဂျာမန်အချိုပွဲများ ရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဂျင်းပေါင်မုန့် သို့မဟုတ် lebkuchen ကွတ်ကီးများ, အ apfelkuchen သို့မဟုတ် ပန်းသီးအစပ်၊ ဘိန်းစေ့များပါသော strudel၊ ပန်ကိတ် သို့မဟုတ် kaiserschmarrn၊ Black Forest ကိတ်မုန့်၊ ပုံမှန်ခရစ္စမတ်အခိုးခံရသော ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Alemania » ရိုးရိုးဂျာမန်ဟင်းလျာများ
ဤအီစတာအတွက် ကားခရီးစဉ်အတွက် အကြံပြုချက်များ